Optogenetics သည်သန္ဓေသားအလတ်စား spiny neuron များအား cocaine-induced behavioral sensitization (dopamine D2 receptors) ကိုဖော်ပြသည့်အခန်းကဏ္reveကိုဖော်ပြသည် - Your Brain On Porn
Optogenetics ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း (2) တွင် dopamine D2014 receptors ဖော်ပြ accumbal အလတ်စား spiny အာရုံခံများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှထုတ်ဖော်ပြသ
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2014; 8: 336 ။
အောက်တိုဘာ 13, 2014 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2014.00336
Shelly Sooyun သီချင်း,1,† Byeong ဇွန် Kang,1,† လဲ့ဝမ်,2,3,4,† Hyo Jin Lee က,1 hye-ri Sim,1 Tae Hyong Kim က,1 Sehyoun Yoon,1 Bong-ဇွန်လ Yoon,1 ဂျော့ခ်ျဂျေသြဂတ်,2,3,4 နှင့် ဂျာ-Hyun Baik1,*
စာရေးသူသတင်းအချက်အလက်► အပိုဒ်►မှတ်ချက်ပြု မူပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်သတင်းအချက်အလက်►
ကြာရှည်ခံသည်နျူကလိယ accumbens (NAc) အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်မူးယစ်ဆေး-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုရန်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအတွက် dopamine D2 receptors (D2Rs) ဖော်ပြ NAc အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) ၏အခန်းကဏ္ဍဆနျးစစျဖို့ optogenetic ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ channelrhodopsin-2 (ChR2) ကုဒ်သွင်း Adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင် D2R-Cre Transgene ကြွက်များ၏ NAc သို့အပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုအရွေးချယ် NAc အတွက် D2R-MSNs photostimulate ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ D2R-MSN ကို၏ photostimulation အိမ်နီးချင်း MSNs အတွက် inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (IPSCs) evoked ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ D2R-MSNs ဒေသခံ inhibitory ဆားကစ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ NAc D2R-MSN ကို၏ Photostimulation Vivo အတွက် ကနဦးမဟုတ်သလိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုမထိခိုက်ခဲ့သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာကာလအတွင်း photostimulation ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ် attenuated ။ ဤရလဒ်သည် NAc ၏ D2R-MSNs ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် plasticity အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက် relapse အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါပြသပါ။
keywords: optogenetics, အလတ်စား spiny အာရုံခံ, dopamine D2 receptors, ကင်း, မူးယစ်ဆေးစွဲ
Dopamine (DA) အချက်ပြဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ (ပညာရှိနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, 2004; goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Berridge, 2007) ။ dopaminergic မမှန်၏လူသိရောဂါဗေဒတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း (Robinson နဲ့ Berridge ဖြစ်ပါသည်, 1993, 2003) ။ စွဲလမ်းစေတ္ထုများမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်သပ္ပါယ်ပြောင်းလဲမှုများ DA mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိမော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာ level မှာဖြစ်ပေါ်; ဤအ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့လေးနက်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (သောမတ်စ် et al ကြားမှဆက်လက်ရှိသည့်ရောဂါ relapsing တစ်နာတာရှည်ဖြစ်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ , 2008; Baik, 2013) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ်အရပျကိုယူသောပြုပြင်မွမ်းမံ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေမူးယစ်ဆေးစွဲနားလည်သဘောပေါက်ဖို့, အရှင်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Dopamine D1 receptors (D1R) နှင့် D2 receptors (D2R) မြင့်မားသည့် striatum ရဲ့အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါဟာပိုကောင်းနျူကလိယ accumbens (NAc) အဖြစ်လူသိများသည့် ventral striatum အတွက်ကြာရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် adapter,, အစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဖြစ်မူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေ (Lobo နှင့် Nestler မှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအကြံပြုထားသည် 2011; Smith က et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာကနေ Dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်များအားဖြင့် NAc innervate ။ အဆိုပါ prefrontal cortex, အ hippocampus ၏ ventral subiculum, အ basolateral amygdala ကို၎င်း, thalamus (Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး,: အ NAc အတွင်းဆဲလ်၏ 95 ကျော်% လေးကိုအဓိကဦးနှောက်ဒေသများထံမှ excitatory သွင်းအားစုခံယူသော MSNs ဖြစ်ကြ၏ 2010; Lüscherနှင့် Malenka, 2011) ။ , midbrain DA ဒေသများသို့တိုက်ရိုက် D1Rs နှင့်စီမံကိန်းဖော်ပြကြောင်းတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း MSNs, နှင့် ventral pallidum (Kreitzer နှင့် Malenka မှ D2Rs နှင့်စီမံကိန်းဖော်ပြကြောင်းသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs: အ NAc အတွင်း MSNs နှစ်ခုအဓိက subpopulations သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် 2008; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010; Lüscherနှင့် Malenka, 2011; Smith က et al ။ , 2013) ။ MSN ကို GABAergic ဖြစ်ကြသည်သောကြောင့်, MSNs အာရုံခံ၏ activation လည်း GABAergic (Chevalier နှင့် Deniau နေသော၎င်းတို့၏မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်တားစီးပါလိမ့်မယ် 1990) ။ ထို့ကြောင့်, D1R-MSNs ၏ activation ထို့နောက်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သော midbrain DA အာရုံခံ, (Lüscherနှင့် Malenka, excite ပါလိမ့်မယ် 2011; Bocklisch et al ။ , 2013).
တစ်ဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုံးစံ၌ Cre recombinase ဖော်ပြကြောင်းဗီဇအင်ဂျင်နီယာကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာသေးမီလေ့လာမှုများကိုကင်းစွဲအပြုအမူတွေအတွက် D1R-MSNs နှင့် D2R-MSNs များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပါပြီ။ ထိုသို့သောကြွက်ရွေးချယ် D1R-MSN ကိုသို့မဟုတ် D2R-MSN ကို manipulate မှတိကျသောအဆိ, optogenetic စုံစမ်းစစ်ဆေးသို့မဟုတ် DREADD (သီးသန့်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးများက activated ဒီဇိုင်နာ receptors) ၏မျိုးဗီဇပစ်မှတ်ကို enable ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် MSNs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုအချို့သောသဘောတူညီမှုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်: D1R-MSNs ပုံစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်, မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍ (သို့မဟုတ်တစ်ခု inhibitory အခန်းကဏ္ဍ) D2R-MSNs ဘို့အကြံပြုထားသည်စဉ် (Hikida et al ။ , 2010; Lobo et al ။ , 2010; ဖာဂူဆန် et al ။ , 2011; Bock et al ။ , 2013) ။ ကိုကင်းထိတွေ့ပုံနှစ်ခုလုံးကို MSN ကိုလူဦးရေ (Lobo et al အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်အတွက် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ , 2010; Lobo နှင့် Nestler, 2011; Grueter et al ။ , 2013) ။ က D1R-MSNs နှင့် D2R-MSNs ကင်း-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ဆန့်ကျင်အခန်းကဏ္ဍ play ပုံသော်လည်း, D2R-MSNs ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
ယခင်ကက D2R နောက်ကောက် (KO) ကြွက် D2R (Baik et al ၏မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ sensitivity ကိုသာအနည်းငယ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူပုံမှန်ကင်း-mediated အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 1995; Chausmer et al ။ , 2002; sim et al ။ , 2013) ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ D2R KO ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်အဖြစ်ကိုကင်း-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေကိုဖိနှိပ် (Sim et al ။ , 2013) ။ တိကျတဲ့ခေါက်-ချ NAc အတွက် D2R ၏ Basal locomotor လှုပ်ရှားမှု, မကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းမထိခိုက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်တားစီးဖို့စိတ်ဖိစီးမှုများ၏စွမ်းရည်ကိုအပ်နှင်းထားခြင်း (Sim et al ။ , 2013) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပြင်းထန်စွာ NAc အတွက် D2R ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်း-mediated အပြုအမူာင်းတားဆီးမထားဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဲဒီအစားက NAc အတွက် D2R ကင်း-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေအတွက်တိုး (Sim et al ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစိတ်ဖိစီးမှု-ဖြစ်ပေါ် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍပုံရသည်။ , 2013).
ဤတွင်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအတွက် NAc D2R-MSNs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ဖို့ optogenetics အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဦးနှောက်အချပ်ကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ D2R-MSNs ၏ photostimulation အိမ်နီးချင်း MSNs ပါဝင်သော NAc အတွင်းဒေသခံ inhibitory ဆားကစ်မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းရှာပါ။ NAc D2R-MSNs ၏ Photostimulation Vivo အတွက် ကနဦးမဟုတ်သလိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမသက်ရောက်သည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာကာလအတွင်း NAc D2R-MSNs ၏ထပ်တလဲလဲ activation ကိုကင်း-သွေးဆောင်စွဲလမ်းအပြုအမူ attenuates ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို NAc ၏ D2R-MSNs ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် plasticity အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ချုပ်ရာပြီးနောက် relapse အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါပြသပါ။
တစ်ဦး C2Bl / 57 နောက်ခံပေါ်တွင် D6-Cre BAC Transgene ကြွက် MMRRC (Mutant မောက်ဒေသဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်စင်တာ, B6.FVB (CG) -Tg (Drd2-cre) ER44Gsat / Mmucd) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်မှာ D2-Cre Transgene ချို့တဲ့ littermates အဆိုပါ D2-Cre ကြွက်များအတွက်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများစဉ်ဆက်မပြတ်အခြေအနေများအောက်တွင်တိကျတဲ့ရောဂါပိုး-အခမဲ့အတားအဆီးစက်ရုံအတွက်ထိန်းသိမ်းထားနှင့် 12-ဇအလင်းပေါ် 12-ဇမှောင်မိုက်အချိန်ဇယားကိုခံခဲ့ရသည်။ တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်နှင့် KIST ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများကအတည်ပြုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
pAAV-EF1a-DIO-hChR2 (H134R) -EYFP-WPRE ရက်ရက်ရောရောကားလ် Deisseroth (စတန်းဖို့ဒ် Univ ။ ) များကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။ AAV ၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့, HEK293T ဆဲလ်ပဋိဇီဝဆေးနှင့် FBS နှင့်အတူ DMEM မီဒီယာစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ transfection မီနေ့ရက်များ, 90-စင်တီမီတာဟင်းလျာများထဲကနေ 10% မြစ်ဆုံထက်ကျော်လွန်လေးပြား% မြစ်ဆုံ 15 ငါး 18-စင်တီမီတာဟင်းလျာများပေါ်သို့ချထားတဲ့နှင့် 22-60 ဇများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးသို့မဟုတ် 70 သည်အထိခဲ့ကြသည်။ HEK293T ဆဲလ် jetPEI transfection ဓါတ်ကူပစ္စည်း (QBiogene) ကို အသုံးပြု. pAAV-DIO-ChR2-EYFP နှင့်အတူ pAAV-DJ သမားနှင့် pHelper transfected ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DNA ကို / DMEM / pei ကော့တေး 20 မိဘို့အခန်းအပူချိန်မှာ vortexed နှင့်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ ပေါက်ဖွားပြီးနောက်, transfection အရောအနှောအသီးအသီး 15 စင်တီမီတာပန်းကန်မှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 48 ဇများအတွက် 0.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ Transfected ဆဲလ် transfection ပြီးနောက် 6750 ဇရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် 50% ဆိုဒီယမ် deoxycholate (Sigma;; D1014) နဲ့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အ 37 benzonase nuclease ၏ယူနစ် / ml (E1 Sigma) ။ 3000 မိဘို့ပါ g × 15 မှာ centrifuging အားဖြင့်ဆယ်လူလာအပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်, supernatant တစ် 0.45 မီလီမီတာ PVDF filter ကို (Millipore) မှတဆင့် filtered ခဲ့သည်။ AAV- DJ သမားအမှုန်များ၏သန့်စင် HiTrap heparin ဆှဖှေဲ့ကော်လံ (GE Healthcare) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ AAV ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့, တစ်ဦး 15 မော်လီကျူးအလေးချိန် cutoff နှင့်အတူ Amicon Ultra-100,000 centrifugal filter ကိုယူနစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စုစည်းဗိုင်းရပ်စ် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိုလှောင် aliquoted နှင့်အေးခဲ။ နောက်ဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ပြင်းအား3~6× 10 ခဲ့သည်12 တစ်ဦးချင်းစီ AAV များအတွက် ml နှုန်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုန်။
Stereotaxic ဆေးထိုးခြင်းနှင့် optical fiber ကိုနေရာချထား
၁.၆ μμl Zoletil နှင့် ၀.၀၅ μl xylazine (Rompun, Bayer) ၏ကိုယ်ထည်အလေးချိန်၏ဂရမ်နှုန်းဖြင့် ip ထိုးဆေးများဖြင့်တိရစ္ဆာန်များကိုထုံဆေးပေးပြီး Stototaxic ယန္တရား (David Kopf Instruments, Tujunga, CA) တွင်ထားခဲ့သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်များကိုထိုးသွင်းရန်အတွက် ၀.၀၁ ဒီဂရီထောင့် (NA +1.6; ML ± 0.05; DV -31) AP သည်ဗိုင်းရပ်စ် ၂ µl ကို NAc သို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သွင်းရန် ၃၁-gauge siringa အပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဆေးထိုးပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီဆေးထိုးပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင်ထားခဲ့သည်။ implantation များအတွက် fiber-optic cannula တစ် ဦး zirconia ferrule (အချင်း2မီလီမီတာနှင့်အရှည်0မီလီမီတာ) နှင့် optical ဖိုင်ဘာ (အချင်း 1.7 µmm) ၏ပြားချပ်ချပ်ပါဝင်သည်။ D1.3-MSNs ကို illumination လုပ်ရန် fiber-optic cannula ကို NAc သို့ implantation ကိုချက်ချင်းဗိုင်းရပ်စ်ထိုးပြီးနောက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ fiber-optic cannula ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ကိုသြဒီနိတ်သည် NAc ကိုပစ်မှတ်ထားရန် 4.5 ° (AP +0.1; ML ± 10; DV -1.25) ၏ထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ optical fiber ကိုကျောက်ချရပ်နားရန်အတွက် screw နှစ်ခုကို fiber-optic cannula ရဲ့ implantation site ရဲ့နောက်ဖက်ရှိ ဦး ခေါင်းခွံထဲကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။ C-B Superbond (Sun Medical) သည် ဦး ခေါင်းခွံပေါ်တွင် fiber-optic cannula ကို fix ရန်၎င်း cannula ၏အောက်ခြေပတ်လည်ရှိ ဦး ခေါင်းခွံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးချခဲ့သည်။ C&B Superbond ခိုင်မာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆေးခြောက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသူမှလွှတ်လိုက်ပြီးသွားဘိလပ်မြေ (Poly-F, Dentsply) ကိုဆေးခြောက်နှင့်ဝက်အူများပတ်ပတ်လည်တွင်အသုံးချခဲ့သည်။ အဆိုပါ cannulation site ကိုလှည့်ပတ်ခွဲစိတ်ပိတ်ဖို့ရန်, Vetbond တစ်သျှူးကော် (4.5 M, 200) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ implantation ပြီးနောက်ကြွက်များကို ၃ ရက်ဆက်တိုက်ပantibိဇီဝဆေးများ (Enrofloxacin,2mg / kg, q0h) နှင့် analgesia (Carprofen, 1.7 mg / kg, q 1.35 h) ကိုအရေပြားအောက်ထိုးဆေးထိုးပေးခဲ့သည်။
Vivo အတွက် photostimulation
တစ်ဦးက 200 μm patch ကိုကြိုးတစ်ဦးလက်ကို အသုံးပြု. နာတာရှည် implants optical fiber ကို၏ပြင်ပသောအဘို့ကိုချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်။ optical အမျှင်အပြာရောင်လေဆာ diode (473 nm, MBL-III ကို 473-150 MW) တစ်ခု FC အသင်း / PC ကို adapter မှတဆင့်ပူးတွဲ ဖြစ်. , အလင်းပဲမျိုးစုံတစ် stimulator (BNC 575) မှတဆင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ ChR2-ဖော်ပြအာရုံခံ၏ photostimulation အဘို့, ဆွပါရာဒိုင်း 20 Hz အကြိမ်ရေ,5ms သွေးခုန်နှုန်းကြာချိန်နဲ့အလင်းအာဏာ 2-5 MW ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ patch ကိုကြိုးကနေထုတ်လွှတ်အလင်းကိုပါဝါတစ် S100C အလင်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူတစ်ဦးပါဝါမီတာ (PM121D) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည်။
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အသက် 2-11 ရက်သတ္တပတ်သော electrophysiological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းမဲ့ကြွက်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအသက် 13-5 ရက်သတ္တပတ်မှာအထီး D6-Cre ကြွက်တွေနဲ့အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် D2-Cre နှင့် Cre အနုတ်လက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်ကြွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းသျောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုသည်အထိလှောင်အိမ်မှ acclimate ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီခြယ်လှယ်အဘို့, ကြွက်ကို (စမ်းသပ်ဆဲအခန်း၏အရောင်အဝါ 60 lux ခဲ့) လေ့အဘို့ခွင့်ပြုပါရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖို့စမ်းသပ်မှုစတင်ခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်အခန်းထဲ 70 မိပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်ယန္တရားမဆိုအလားအလာအနံ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်စမ်းသပ်ချက်များအကြား 70% အီသနောနှင့်အတူသန့်စင်ခဲ့သည်။
ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းစတင်ဘို့, ကြွက်3ရက်ဆက်တိုက်ဆားထိုး (ip) မှ habituated ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ (15 ကီလိုဂရမ် MG ဆားသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူထိုးသွင်း-15 ရက်ဆက်တိုက်အဘို့, ip) ။ ကြွက်တစ်ဦး 0.9, G အပ်နှင့်အတူကင်း Hydrochloride (ဂျွန်ဆင် Mattney, Edinburgh, ဗြိတိန်) ဆား (30% NaCl) အတွက်ဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေနှင့်အတူ intraperitoneally (ip) ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်အသီးအသီးဆေးထိုးပြီးနောက်ကြွက် 30 မိဘို့ open-လယ်ပြင်ခန်း၌အလျားလိုက် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်အပေါ် photostimulation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (ပုံ၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက် (ပုံ​​​5), 5), ကြွက်အိမ်မှာလှောင်အိမ်ထဲမှာ3မိအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလေး 30-မိကာလများအတွက် NAc ပေါ်သို့မြန်မာနိုင်ငံသ dual-fiber-optic patch ကိုကြိုးမှတဆင့်အပြာအလင်း illumination ပေးထားခဲ့ကြသည်။ မောက်ဦးခေါင်းခွံပေါ်မှာတည်ရှိ fiber-optic cannula ထံမှ patch ကြိုးဖယ်ရှားခဲ့သည်နှင့်ကြွက်အနည်းဆုံး 10 မိရာကြွင်းလေသမျှမှာပေးထားခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ထို့နောက်ကင်းသို့မဟုတ်ဆား (ဖနွမ်းပင်မြို့၌ 1d-ဖနွမ်းပင်မြို့၌ 5d) ဖြစ်စေနဲ့အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ အကဲဆတ်ခြင်းစတင်ပြီးနောက်, ကိုကင်းဆားမဆိုဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲ 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆုတ်ခွာခဲ့သည်။ ဒီဆုတ်ခွာကာလအတွင်းအဘယ်သူမျှမ photostimulation လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးထို့နောက်မူးယစ် (10 မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ်တစ်စိန်ခေါ်မှုထိုး၏ဆေးထိုးကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်-1ပုံထဲမှာရုပ်ပြအဖြစ် NAc ၏ photostimulation ပြီးနောက်, ip) Figure5A.5A။ အဆိုပါကင်းဆုတ်ခွာကာလ (ပုံစဉ်အတွင်း photostimulation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန် (Figure6), 6အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့), ကြွက်ပုံများအတွက် (ထိခိုက်လွယ်များအတွက်တူညီ protocol ကိုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည် Figure5) 5) မှလွဲ. photostimulation ပေးထားခဲ့သည်။ ကိုကင်းအကဲဆတ်ခြင်းစတင်ပြီးနောက် photostimulation 1 ကာလ၏စုစုပေါင်းဆုတ်ခွာကာလအတွင်း 14 ဇများအတွက်နေ့စဉ် NAc မှလျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဆုတ်ခွာ၏ 14 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ကြွက်အပေါငျးတို့သအုပ်စုများ 10 ကီလိုဂရမ် Mg (ကိုကင်းများ၏စိန်ခေါ်မှုကိုသောက်သုံးသောနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြ-1).
နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ရွေးချယ် photostimulation ။ (က) AAV-DIO-ChR2-EYFP ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏ပေးပို့ခွငျးအားဖွငျ့ NAc D2R အာရုံခံအတွက် ChR2 ၏ရွေးချယ်စကားရပ်။ စကေးဘား: နောက်ခံပုံ, 1 မီလီမီတာ: ထည့်သွင်း, 200 μm။ (ခ) Confocal ပုံရိပ်တွေ ...
D2RCre-MSNs ၏ Photostimulation ဒေသခံ inhibitory ဆားကစ်မောင်း။ (က) ChR2 ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် photostimulated နိုင် ChR2 နှင့်တစ်ဦးကိုအိမ်နီးချင်းကလာပ်စည်း (arrowhead) ကိုဖော်ပြမထားဘူးတဲ့ဆိုးဆေး-ဖြည့်အာရုံခံဆဲလျဖေါ်ပြခြင်းတိုက်ရိုက် NAc အချပ်၏ Confocal ပုံရိပ်။ (ခ) IPSC ...
NAc ဆဲလ်များ၏ Properties ကို။ (က) Alexa 594 နှင့်ပြည့်စုံအာရုံခံ၏ two-ဖိုတွန်ချောင်းပုံရိပ်။ (A1) အဆိုပါ ChR2 + / AP အုပ်စုတစ်စုကနေအာရုံခံဆဲလျပြနေစဉ် (A3) အဆိုပါ ChR2- / IPSC အုပ်စုတစ်စုကနေအာရုံခံဆဲလျပြသထားတယ်။ (A2) နှင့် (A4) မှ High-ချဲ့ပုံရိပ်တွေများမှာ ...
Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် NAc အတွက် D2-MSNs ၏ In-Vivo optogenetic activation ၏ဆိုးကျိုးများ. (က) AAV-DIO-ChR2-EYFP အတူ NAc မှာထိုးသွင်း D2 Cre ကြွက်၏ Sagittal အမြင် fiber optic cannula ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် implantation အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 473 nm အပြာရောင်အလင်းဆွ ...
ကိုကင်းထိခိုက်မခံတဲ့ကာလအတွင်း D2-MSN ကို၏ activation ၏ဆိုးကျိုးများ။ (က) ကိုကင်းမှစတင်အရေးကြီးတဲ့၏စကားရပ်စဉ်အတွင်း D2-MSNs ၏ဓာတ်ပုံကို-ဆွဘို့အစမ်းသပ်အစီအစဉ်။ blue-အလင်း illumination (2 ~5MW,5ms, 20 Hz) လေးခုအဘို့ကိုအပ်ခဲ့သည် ...
ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း D2-MSN ကို၏ activation ၏ဆိုးကျိုးများ။ (က) ကိုကင်းမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း D2-MSNs ၏ဓာတ်ပုံကို-ဆွဘို့အစမ်းသပ်အစီအစဉ်။ blue-အလင်း illumination (2 ~5MW,5ms, 20 Hz) ရှစ် 3-မိကာလအဘို့ကိုအပ်ခဲ့သည် ...
နဲ့ Immunofluorescence နှင့် confocal လေဆာ microscopy
နဲ့ Immunofluorescence အဘို့, ကြွက် Zoletil (intraperitoneally Virbac, 1.6 μl / ဂရမ်) နှင့် 0.05 နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်μl / g Rompun (Bayer) နှင့်အတူ perfused filter ကို-ပိုး 0.1 M က PBS 4% paraformaldehyde / PBS ဖြေရှင်းချက် (Sigma) ကို အသုံးပြု. fixation အားဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ဦးနှောက်ထို့နောက်အထက်အဖြစ်ရေခဲ-အအေး fixative နှင့်အတူဖယ်ရှားခြင်းနှင့်4ဇများအတွက် Post-fixed ခဲ့သည်။ ဦးနှောက် 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ 0.1% sucrose /2M က PBS အတွက်ထို့နောက်ရေခန်းခြောက်ခဲ့သညျ။ ဦးနှောက်ထို့နောက်အေးစက်နေတဲ့တို့ 40-μm-ထူဆက်တိုက် Coronal ကဏ္ဍများကိုတစ်ဦး cryostat (Leica CM 1900, ဂျာမနီ) အပေါ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ နေ့ချင်းညချင်း 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ: (1, Millipore, AB0.1P 5) ကဏ္ဍများ (0.2 μm) 100% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်နှင့် 2% ထရီ X-1 ်နှင့်ယုန် polyclonal Anti-D500R နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး 5084 M က PBS အတွက်4ဇများအတွက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်။ ,: (Molecular စုံစမ်းစစ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Eugene, OR, အမေရိကန်နိုင်ငံ 0.2 100) နှင့် 1 μl / ml 568 1% ထရီ X-500်PBS နှင့်အရင်ဆေးပြီးနောက်နမူနာ Alexa fluor 0.2 ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန် IgG နှင့်အတူ4ဇများအတွက် RT ကိုမှာနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် 6-diamidino-2-phenyl-indole HCl (DAPI; Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်နိုင်ငံ) PBS အတွက် 1% ပုံမှန်ဆိတ်သငယ်ကိုသွေးရည်ကြည်နှင့် 0.2% ထရီ X-100 ်။ အပျက်သဘောဆောင်သောထိန်းချုပ်မှုအမျှနမူနာ DAPI သာအလယ်တန်း antibody ကိုအတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများတစ် C1 Plan ကို Apo × 40 / 1.4 ရေ confocal လေဆာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ် (LSM 700, Zeiss, ဘာလင်, ဂျာမနီ) အပေါ်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
နျူကလိယအတွက် Electrophysiology နှင့် photostimulation ချပ် accumbens
ကြွက် ChR4-EYFP ၏အကောင်းဆုံးစကားရပ်အောင်မြင်ရန်, စမ်းသပ်ချက်ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးပြီးနောက်2ရက်သတ္တပတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ထို့နောက်စူးရှသောဦးနှောက်ကိုအချပ်၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့အ anesthetized နှင့်ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက်ကိုအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားပြီးခဲ့ချက်ချင်း (mm အတွက်) ပါဝင်တဲ့ရေခဲ-အအေးဖြတ်တောက်ခြင်းဖြေရှင်းချက် 250 Sucrose, 26 NaHCO ထဲတွင်နေရာ3, 10 D-ဂလူးကို့,3မျိုးမင်း-inositol, 2.5 KCl,2Na-pyruvate, 1.25 nah2PO4, 0.5 ကောဘစ်အက်ဆစ်, 1 Kynurenic အက်ဆစ်နှင့်7MgCl2 95% အိုနှင့်အတူပါပဲခဲ့သော2/ 5% CO2 (သော pH = 7.4) ။ အဆိုပါ NAc ်မှု Coronal ဦးနှောက်အချပ် (250 μmထူ) တစ်ဦး vibratome (Leica VT 1200 S) ကို အသုံးပြု. ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ (mm အတွက်) ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့အတု cerebrospinal fluid (ACSF) နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်: 11 D-ဂလူးကို့စ, 125 NaCl, 25 NaHCO3, 1.25 nah2PO4, 2.5 KCl, 1.25 MgCl2 နှင့် 2.5 CaCl2 34 မှာမှတ်တမ်းတင်မတိုင်မီ 1 ဇဘို့ကို C °။ ချပ်ထို့နောက်ရာအိုတစ်ဦး submersion မှတ်တမ်းတင်အခန်းထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်2ACSF ဖြေရှင်းချက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် superfused ခဲ့သည် -saturated ။ NAc နှင့် VTA အတွက်ဆဲလ်တစ် 2X ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းမှန်ဘီလူးနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည် DiC မှန်ဘီလူးတပ်ဆင်ထားတစ် 1000-ဖိုတွန်ဏု (Olympus တို့ FV25 MPE, တိုကျို, ဂျပန်) ကို အသုံးပြု. မြင်ခဲ့ကြသည်။ မြေတပြင်လုံး-ဆဲလ် patch ကိုညှပ်အသံသွင်းနေတဲ့ Multiclamp 700B အသံချဲ့စက်နှင့် Digidata 1440A Digital (Molecular ဖုန်းများအတွက်, LLC) နှင့်အတူ NAc ဆဲလ်မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ဒေတာကို pCLAMP 10.2 software ကိုသုံးပြီးနမူနာများနှင့်ထပ်မံ Clampfit 10.2 software ကို (Molecular ဖုန်းများအတွက်, LLC) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ 3-5 MΩအကြားကိုခံနိုင်ရည်နှင့်အတူ patch လျှပ် (mm အတွက်) ပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးဖြေရှင်းချက်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ 130 K-gluconate,2NaCl,2MgCl2, 20 HEPES,4Na2ATP, 0.4 Na3GTP, 0.5 EGTA နှင့် 10 Na2- pH N 7.3 KOH ကို အသုံးပြု၍ ၇.၃ ချိန်ညှိသော pH နှင့်အတူ phosphocreatine ။ Bicuculline (1 μM) သည် GABA receptors များအားစမ်းသပ်မှုများအနက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်း၌ပိတ်ဆို့ရန် ဦး နှောက်အချပ်ကိုရေချိုးရန်အသုံးပြုသည်။
ChR2-EYFP ဖော်ပြ NAc ဆဲလ်တစ် LED အလင်းအရင်းအမြစ် (460 ± 27 nm, UHP-Mic-LED-460, Prizmatix) က photostimulated ခဲ့ကြသည်။ ယင်းကို LED ကနေအပြာရောင်အလင်းနောက်ထပ်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှား filter ကို (470-495 nm) တပ်ဆင်ထားတဲ့ filter ကိုတုံးအားဖြင့် filtered နှင့် attenuated ခဲ့သည်; အလင်း (10 ms ကြာချိန်, 0.0366-0.354 MW / မီလီမီတာတောက်2) 25-5 Hz ၏ကြိမ်နှုန်းမှာ 40X ရည်မှန်းချက်မှန်ဘီလူးကနေတဆင့်ဦးနှောက်ကိုအချပ်မှကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ချက်များအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ခုနှစ်, photocurrents2့ကြာချိန်အလင်းတောက်တုံ့ပြန် ChR2-ဖော်ပြဆဲလ်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
ဒေတာများကို± sem ဆိုလိုတယ်အဖြစ်တင်ဆက်ကြသည်နှင့် Two-Tails ကျောင်းသားရဲ့နဲ့အတူသုံးသပ်ခဲ့ကြသည် t-test, ဒါမှမဟုတ် Bonferroni ရဲ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကှဲလှဲ၏ Two-လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူ post ကို hoc စမ်းသပ်။ တစ်ဦးက P<0.05 ၏တန်ဖိုးကိုစာရင်းအင်းသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ရွေးချယ် photostimulation
ကိုကင်း-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် NAc D2R-MSNs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့ NAc D2R အာရုံခံလှုံ့ဆော်ဖို့ optogenetic ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရွေးချယ်အလင်းဖြင့် NAc အတွက် D2R-MSNs ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့, AAV-DIO-ChR2-EYFP coding ဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင် stereotaxically D2R-Cre BAC Transgene ကြွက်များ၏ NAc သို့ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။4ရက်သတ္တပတ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးပြီးနောက်, ChR2-EYFP ၏ကြံ့ခိုင်စကားရပ် NAc (ပုံထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် (Figure1A) .1A) ။ D2R-MSNs အတွက် ChR2 စကားရပ်၏တိကျသောနဲ့ Immunofluorescence confocal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကအတည်ပြုခဲ့သည်: YFP-tagged ChR2 ၏စကားရပ် NAc အတွက် D2R နှင့်အတူပူးတွဲဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့သည် (ပုံ (Figure1B), 1B), ChR2 NAc အတွက် D2R-ဖော်ပြအာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကွောငျးဖေါ်ပြခြင်း။
ထိုသို့သောချဉ်းကပ်ဥပမာ Lobo et al (အခြားလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးပေမယ့်။ , 2010), ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးထိုးလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏အသေးစိတျကအရေးတိကျတဲ့စမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင် optogenetic ထိန်းချုပ်မှုမှတ်တမ်းတင်အောင်, တဦးတည်းဓာတ်ခွဲခန်းမှအခြားမှကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ NAc ချပ်ထဲမှာ MSNs ကနေတပြင်လုံးကို-ဆဲလ် patch ကိုညှပ်အသံသွင်းအောင်နေဖြင့် ChR2 ၏အလုပ်လုပ်တဲ့စကားရပ်အကဲဖြတ်။ MSNs ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်: (1) ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးအပျက်သဘော -80 MV ထက်အတော်လေး hyperpolarized ကျိန်းဝပ်မြှေးပါးအလားအလာ (RMP), (2) လက်တွေ့အသုံးချလက်ရှိပဲမျိုးစုံတုံ့ပြန်ပစ်ခတ် AP ၏ပုံမှန်ပုံစံ; လက်ရှိသွေးခုန်နှုန်းကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးက AP ၏ပစ်ခတ်ရန်မှ (3) ရှည်လျားအောင်းနေချိန်, တစ်ဦး hyperpolarization-activated စုံလုံလက်ရှိကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ hyperpolarization စဉ်အတွင်းတစ်ဗို့ "SAG" ၏ (4) မရှိခြင်း (ကျနော်h); သူတို့ရဲ့ဆဲလ်အသေကောင် (Chang နှင့် Kitai နှင့် (5) အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, 1985; O'Donnell နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 1993; le Moines နှင့် Bloch, 1996; Taverna et al ။ , 2008) ။ အပြာရောင်အလင်း (470 nm) ရှုထောတစ်ခုလုံးကိုလယ်ပြင် (0.78 မီလီမီတာကျော်လျှောက်ထားခဲ့သည်2) -69 MV တစ်ဦးကိုင်ထားသည့်အလားအလာမှာ MSNs ဗို့-clamping နေစဉ်။ တချို့က MSNs သူတို့ရဲ့ somata အတွက် YFP ချောင်းကိန်းဂဏန်းများအတွက် (မြှားအဖြစ်ထင်ရှား, ChR2 ထုတ်ဖော်ပြောဆို 1C1, C3) ။ ထိုကဲ့သို့သောအာရုံခံပိုကြီး photocurrents ကိုဆွဲထုတ်တောက်ပတဲ့အလင်းလှုံ့ဆော်မှု (ပုံနှင့်အတူများပြားလှသော photocurrents ပြ (Figure1D) .1D) ။ အထွတ်အထိပ် photocurrent လွှဲခွင်နဲ့အလင်းပြင်းအား (ပုံအကြားဆက်ဆံရေး (Figure1E) 1E) 0.054 ± 0.0023 MW / မီလီမီတာတစ်နှစ်ခွဲ-အကျယ်ချဲ့အလင်း sensitivity ကိုရှိခဲ့တယ်2 နှင့် 1.16 တစ်ဦးအလုပျသအထွတ်အထိပ်လွှဲခွင်, 0.16 na (± sem ဆိုလို± n = 4) ။
လက်ရှိ-ညှပ်အခြေအနေများအောက်တွင်, ChR2 ဖော်ပြ MSNs အလင်းပဲမျိုးစုံရထားတုံ့ပြန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော APS ပစ်ခတ် (10 ms ကြာချိန်; ပုံ Figure1F) .1F) ။ 0.1 MW / မီလီမီတာထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ဤအခြေအနေများ, အလင်းပြင်းထန်လက်အောက်တွင်2 APS ကျလာသောဖို့လုံလောက်သောခဲ့ကြသည် (ပုံ (Figure1G, 1G, n = 5) ။ 20 Hz မှာအလင်း-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု evoking APS မှာလျော့နည်းထိရောက်သောခဲ့ကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ် depolarization စေချုပ်ဖော်ပြနေချိန်မှာ APS ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိန်းဂဏန်းများ (တက် 40 Hz မှ photostimulation ကြိမ်နှုန်းမှာ evoked ခဲ့ကြသည် 1F, G).
D2R-MSNs ၏ Photostimulation ဒေသခံ inhibitory ဆားကစ်မောင်း
ChR2-အနုတ်လက္ခဏာ MSNs အတွက် postsynaptic တုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာစဉ် NAc အတွက်ဒေသခံဆားကစ်ပေါ်မှာ D2R-MSNs လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးဆက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့ ChR2 ဖော်ပြ presynaptic MSN ကို photostimulated (ပုံ (Figure2A) .2A) ။ ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အာရုံခံဆဲလျ Figure2A2A EYFP ချောင်း၏မရှိခြင်းအဖြစ်ပုံမှာပြထားတဲ့ကဲ့သို့ရေတိုအောင်းနေချိန် photocurrents ၏မရှိခြင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ်, ChR2 ဖော်ပြမထားဘူး Figure1D.1D။ 69 တစ်ဦးအောင်းနေချိန် 10 ms (ပုံ±ပြီးနောက်သို့သော် postsynaptic MSNs -9.0 MV တစ်အလားအလာအဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်အခါ, 0.42 ms ကြာချိန်အလင်းတောက်အပြင်ရေစီးကြောင်း evoked (Figure2B, 2B, n = 15) ။ တစ်ဦးအလင်း flash ကိုလျှောက်ထားစဉ်ကဤတုံ့ပြန်မှု၏သဘောသဘာဝကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်, postsynaptic အမြှေးပါးအလားအလာ, MV -99 မှ -39 MV အကြားကွဲပြားခဲ့သည် (ပုံ (Figure2C) .2C) ။ အမြှေးပါးအလားအလာ (ပုံနှင့်အတူကွဲပြား light-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု (Figure2D, 2D, n = 6) နှင့် -81 ± 3.4 MV မှာသူတို့ရဲ့ polarity ကပြောင်းပြန်။ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများအတွက် equilibrium အလားအလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ionic အခြေအနေများအောက်တွင် -80 MV ကြောင်းပေးထားခြင်း, အလင်း-သွေးဆောင်အပြင်ရေစီးကြောင်း postsynaptic ဂါဘမြို့သားကကမကထပြုခဲ့လိုရိုက် flux ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်A receptors ။ အဆိုပါဂါဘမြို့သားဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုစမ်းသပ်ဖို့A အဲဒီ receptor ရန် bicuculline (10 μM) အပြင်ပဖြေရှင်းချက်မှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးလုံးဝအလင်း-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု (ပုံကိုပိတ်ဆို့ထား (Figure2B), 2B), အလငျး-သွေးဆောင်တုံ့ပြန်မှု GABAergic inhibitory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (IPSCs) ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြု။
photostimulation သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောသော MSNs4အုပ်စုများ၏တဦးတည်းသို့ခွဲခြားနိုင်: အထက်တွင်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးသော photostimulation တုံ့ပြန် APS မီး ChR1 တစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကို (ChR2 + / AP), ဖော်ပြ (2) ဆဲလ်; အလင်း (ChR2 + / အဘယ်သူမျှမ AP) ကိုတုန့်ပြန်နေတဲ့ subthreshold depolarization evinced ရာ ChR2 ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏ, ဖော်ပြ (2) ဆဲလ်; ChR3 မရှိဟူသောအသုံးအနှုနျးခဲ့ပေမယ့် ChR2 (ChR2- / IPSC) ဖော်ပြ presynaptic MSNs ထံမှအလင်း-သွေးဆောင် IPSCs လက်ခံရရှိကြောင်း (2) အသံတိတ်ဆဲလ်; နှင့်အခြား MSNs (ChR4- / No IPSC) ၏ photostimulation တုံ့ပြန် IPSCs ပြမ (2) ChR2-အနုတ်လက္ခဏာဆဲလ်တွေ။ ဤအမျိုးအစားများကိုအသီးအသီးအတွက်ဆဲလ်များ၏ဆွေမျိုးအချိုးအစားပုံထဲမှာပြသ Figure2E2E (n = 53) ။ ယေဘုယျအားဆဲလ် (45.3%) ၏တစ်ဝက်နီးပါး ChR2 (အုပ်စုများ၏ပေါင်းလဒ် (1) နှင့် (2)) ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ photostimulation တုံ့ပြန်နှစ်ဦးစလုံး photocurrents နှင့် IPSCs ပြမှတျတမျးတငျထားသော MSNs ၏ none; ဒီ D2R-အပြုသဘော MSNs အဆိုပါ NAc အတွင်းဒီတူညီတဲ့ဆဲလ်လူဦးရေ၏အခြားအဖွဲ့ဝင် innervate ကြဘူးကြောင်းဖော်ပြသည်။
အလင်းမှတုံ့ပြန်မှု၏ဤခွဲခြား ChR2 + / အဘယ်သူမျှမက AP ဆဲလ် (အုပ်စုတစ်စု 2) ၏ photostimulation နှင့် ChR2- / No IPSC ဆဲလ် (အုပ်စုတစ်စု 4) circuit ကိုလှုပ်ရှားမှုအထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်းမည်သည့်လျှပ်စစ်အချက်ပြ generate မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် circuit ကို function ကိုအပေါ် photostimulation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသတ်မှတ်ပေးဖို့ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက် NAc photostimulated သောအခါ APS generate တံ့သော ChR2 + / AP MSNs (အုပ်စုတစ်စု 1) ၏ဂုဏ်သတ္တိများ, သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ChR2- / IPSC ဆဲလ် (အုပ်စုတစ်စု 3), အရာ သူတို့အလင်း-သွေးဆောင် IPSCs ခံယူကြောင့် ChR2 + / AP MSNs မှ postsynaptic ဖြစ်ကြသည်။ NAc အတွက် ChR2 + / AP နှင့် ChR2- / IPSC ဆဲလ်တွေနှစ်ဦးစလုံး spiny အာရုံခံ (ပုံအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ (Figure3A) .3A) ။ အဲဒီနှစျခုအုပ်စုများအတွက်အာရုံခံ၏ morphological သို့မဟုတ် electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများမရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ထိုအုပ်စုနှစ်စုအတွင်းအာရုံခံ၏ somata အရွယ်အစား (ပုံဆင်တူခဲ့ကြသည် (Figure3B) .3B) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, -83.0 ± 1.7 vs. -85.0 ± 1.8 MV သူတို့ရဲ့ RMPs (; ± sem ဆိုလို; n = 10, ပုံ Figure3C) 3C) နှင့် input ကိုခုခံတွန်းလှန် (113 ± 15 vs. 133 ± 13 MΩ, n = 6, ပုံ Figure3D) 3D) (အစကွဲပြားခြားနားသောမp > ၀.၅၅ နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ကျောင်းသား t-test) သူတို့၏ AP လက်ရှိပဲမျိုးစုံတုံ့ပြန်ပုံစံများပစ်ခတ်နေစဉ် (ပုံ 3E, F ကို) (လည်းအလားတူခဲ့ကြသည်p > ၀.၅၅ နှစ်ချောင်းရှိတဲ့ကျောင်းသား t-test, n = 6) ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation အဆိုပါ D2R-MSNs ရန်အလွန်ဆင်တူပေမယ့် D2R ဖော်ပြမ postsynaptic အာရုံခံနှင့်အတူဒေသခံ inhibitory ဆားကစ်မြှင့်လုပ်ဆောင်။
ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအတွက် NAc D2R-MSNs ၏ Optogenetic ဆွ
ကျနော်တို့လာမယ့်များ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များကိုလေ့လာ Vivo အတွက် NAc D2R-MSNs ၏ photostimulation ။ dorsal striatum အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation (Kravitz et al locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလို့ပဲ။ , 2010), ကျနော်တို့ Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ် accumbens D2R-MSN ကို activation ၏သက်ရောက်မှု characterizing ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, D2R-Cre ကြွက်နှစ်နိုင်ငံ NAc (D2-Cre (+) NAc-ChR2) သို့ DIO-AAV-ChR2-EYFP ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ D2R-MSNs ထို့နောက်အပြာအလင်း (473 nm,5ms သွေးခုန်နှုန်းကြာချိန်, 20 Hz) နဲ့ photostimulated ခဲ့ကြသည်တစ်ခု optical fiber ကိုမှတဆင့် NAc မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ကြွက်အခနျး (ပုံကိုမှတ်တမ်းတင်သည့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းထားရှိမည်သောအခါ Photostimuli အဆိုပါ3မိ session တစ်ခုအတွင်းမှာလေး 50-မိကြာချိန်ကာလအတွင်းမှာလျှောက်ထားခဲ့သည် (Figure4A) .4A) ။ အပြိုင်ခုနှစ်တွင်တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် Non-Cre WT littermate ကြွက်အလားတူဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ဆင်တူအပြာရောင်အလင်း illumination လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ (-) D2-Cre (+) NAc-ChR2 ကြွက်ထိန်းချုပ်မှု D2R-Cre မှနှိုင်းယှဉ်လျှင် Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မြင့်မားသောအဆင့်ပြသ NAc-ChR2 ကြွက် (ကိန်းဂဏန်းများ 4B, C,) ။ D2R-MSNs ၏ Photostimulation D2-Cre (+) တွင် NAc-ChR2 ကြွက်အလင်းကိုနှိုးဆွ (ပုံရပ်တန့်ပြီးနောက်သက်သာလာပြီဖြစ်သော locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းစေသော (Figure4B) .4B) ။ (-) NAc-ChR2 ကြွက် (ကိန်းဂဏန်းများအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများထိန်းချုပ်မှု D2R-Cre အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် 4B, C,), photostimulation ၏သက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲယင်းသို့ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရဲ့အပူအဖြစ်ဖြစ်နိုင်သော Non-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများထက်, ChR2 ၏ activation ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားရူးနှမ်းကြောင်းညွှန်ပြ။
ဤရလဒ်သည် NAc အတွင်း D2R-MSNs ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိနျးခြုပျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထူထောင် Vivo အတွက်။ ကျနော်တို့လာမယ့်ကိုကင်းများ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုမှအမူအကျင့်ာင်းအပေါ် D2R-MSN ကိုလှုပ်ရှားမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆနျးစစျဖို့ဒီစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အမူအကျင့်ာင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ဖို့နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ထိတွေ့မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်, ထိုကဲ့သို့သောကင်းအဖြစ်, psychostimulants တစ်ခုကနဦးထိတွေ့ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ထုတ်ဖော်အဆင့်သို့ခွဲနိုင်သည်စတင်အပြုအမူာင်း (Vanderschuren နှင့် Kalivas သွေးဆောင်သောချက်ချင်းအာရုံကြောဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ပြထားတယ်, 2000; sim et al ။ , 2013), စကားရပ်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (Vanderschuren နှင့် Kalivas ပြီးနောက်ဆက်ရှိနေသေးကြောင်းအမူအကျင့် plasticity တစ်ကြာရှည်ပုံစံဖြစ်လူသိများသည်နေချိန်မှာ, 2000; sim et al ။ , 2013) ။ ထိုအဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီစဉ်အတွင်း NAc အတွက် D2R-MSNs ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ optogenetics သုံးနေစဉ်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်, ကင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲ intraperitoneal (ip) ထိုးနေစဉ်အတွင်းကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
3 ရက်ပေါင်းကျော်ဆားဆေးထိုးဖို့လေ့ပြီးနောက်ကြွက် 15 ရက်ဆက်တိုက်အပေါ်ကိုကင်း (5 mg / kg) နဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှုချင်းစီထိုးပြီးနောက် 30 မိဘို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည် (ပုံ (Figure5A) .5A) ။ Photostimuli အလငျး (ပုံကိုပိတ်ထားခဲ့သည်ဘယ်မှာ 30 မိကာလနှင့်အတူ illumination ၏3မိကာလ interspersing, ကိုကင်းဆေးထိုးမတိုင်မီ5မိအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကယ်နှုတ်ခဲ့သည် (Figure5A) .5A) ။ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျကြောင်းပေးထားသော (ပုံ (Figure4), 4), photostimuli ကိုကင်းဆေးထိုးရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူဖြစ်နိုင်သမျှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုတင်ကင်း၏အုပ်ချုပ်မှုမှချက်ချင်းအပ်။ ,
ထိန်းချုပ်မှု D2-Cre နှစ်ဦးစလုံး (-) NAc-ChR2 ကြွက်နှင့် D2-Cre (+) NAc-ChR2 ကြွက်တွေဟာထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိုးတုံ့ပြန် locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းသိသိသာသာတိုး (ပုံပြသ (Figure5B), 5B), အကဲဆတ်ခြင်းစတင်ညွှန်ပြ။ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ Photostimulation ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း D2-Cre အလားတူကြောင့် (+), အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းစတင်အကျိုးသက်ရောက်စေဖို့ပေါ်လာ NAc-ChR2 ကြွက်နှင့် D2-Cre မထိန်းချုပ်ခဲ့ဘူး (-) NAc-ChR2 ကြွက်။
15 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုကင်း (5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ၏ထိုကဲ့သို့သောထိုးထပ်ကျော့နေဖြင့်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်း induction ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါး 14 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆုတ်ခွာခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့၏စကားရပ်၏ဒီဂရီကိုကင်းများ၏အနိမ့်ထိုးနှင့်အတူကြွက်တွေစိန်ခေါ်နေဖြင့်လေ့လာခဲ့သည် (10 မီလီဂရမ် /ကီလိုဂရမ်)။ အကဲဆတ်ခြင်း expression မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာပြီးနောက်ဆက်ရှိနေသေးကြောင်းအမူအကျင့် plasticity တစ်ကြာရှည်ပုံစံ (Steketee နှင့် Kalivas ဖြစ်ပါသည် 2011; sim et al ။ , 2013) ။ အကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်ထဲမှာ D2R-MSNs ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆနျးစစျဖို့, NAc ကြိုတင်ကင်း၏အုပ်ချုပ်မှု (ပုံမှချက်ချင်း photostimulated ခဲ့သည် (Figure5A) 5A) အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုကင်းဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ပမာဏအဖြစ်တိုင်းတာခဲ့သည်။
(-) NAc-ChR2 ကြွက် (D2-Cre (-) :: ဖနွမ်းပင်မြို့၌-ဖနွမ်းပင်မြို့၌) ကြွက်-D2-Cre နှစ်ခုစလုံးကိုကင်း-pretreated အုပ်စုများနှင့် D2-Cre (+) NAc-ChR2 (D2-Cre (+): : အကဲဆတ်ခြင်းဖနွမ်းပင်မြို့၌-ဖနွမ်းပင်မြို့၌) -robust စကားရပ် (ပုံဖြစ်ပွားခဲ့သည် (Figure5C) .5C) ။ ကိုကင်း-နှိုးဆွရွေ့လျားပြောင်းလဲမှုများကို၏အချိန်သင်တန်းကိုလည်းအုပ်စုနှစ်စု (ပုံအကြားဆင်တူခဲ့သည် (Figure5C), 5C), အုပ်စုနှစ်စုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်နှင့်အတူ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီနှစ်ခု photostimulation စမ်းသပ်ချက်ဟာ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ activation ကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစတင်သို့မဟုတ်စကားရပ်ကိုထိခိုက်ပါဘူးဖော်ပြသည်။
မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc D2R-MSNs ၏ Photostimulation
အဆိုပါ NAc (Sim et al အတွက် Synaptic plasticity ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကင်း-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တိုးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ D2R-မှီခိုလိုက်လျောညီထွေယန္တရား၏ရွေးချယ်စုဆောင်းမှုအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာစဉ်ကနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု။ , 2013) ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်စေ့စပ်သည့်ယန္တရားများမူးယစ်ဆေး-စွဲချက်တင်ာင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုကနေကွဲပြားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နောက်လာမည့်ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဖြစ်အထက်ကင်းထပ်တလဲလဲဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction ပြီးနောက် D2-Cre (-) နှင့် D2-Cre (+) ကြွက်ဟာ 14 နေ့ကဆုတ်ခွာကာလအတွက်အုပ်စုနှစ်စုခွဲခြားခဲ့ကြသည်: တစျအုပျစု၏နေ့စဉ်အပြာ-အလင်းဆွအကြောင်းမဲ့ခဲ့သည် 1 ဇ (3 မိ× 8 ကြိမ်) အတွက် NAc, အခြားအုပ်စုတစ်စု (ပုံမဟုတ်ခဲ့စဉ် (Figure6A) .6A) ။ ကိုကင်းဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲ photostimulation D2-Cre အတွက်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိခိုက်ဘူး (-) :: ဖနွမ်းပင်မြို့၌-ဖနွမ်းပင်မြို့၌ကြွက် (ပုံ (Figure6B) .6B) ။ ဆနျ့ကငျြ, D2-Cre (+) :: ဖနွမ်းပင်မြို့၌-ဖနွမ်းပင်မြို့၌ကြွက်တွေအတွက်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးသိသိသာသာမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (ပုံကာလအတွင်းအကြိမ်ကြိမ် photostimulation အားဖြင့် attenuated ခဲ့သည် (Figure6B), 6B), ရွေ့လျား၏ကင်း-သွေးဆောင်ဆွ၏အချိန်သင်တန်းထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့် (ပုံ (Figure6C) .6C) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc ၏ D2R-MSNs ၏ photostimulation photostimulation အပြန်အလှန်×ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်း (ကိုကင်း၏စကားရပ်လျှော့ချ F(1,18) = 11.08, P = 0.0037, ပုံ Figure6B) .6B) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ၏ကာလအတွင်း D2R-NAc MSNs ၏ activation ကိုကင်း-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကဖော်ပြသည်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ, prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens (NAc) ပါဝင်သောအဆိုပါ mesocorticolimbic စနစ်တိုးမြှင် dopaminergic ဂီယာနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်, အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအဆင့်လိုက်လျောညီထွေယန္တရားများ (Kalivas နှင့် Duffy ၏အဆငျ့ဆငျ့နဲ့ဆက်စပ်သောမူးယစ်ဆေး၏ချုပ်ရာပြီးနောက်မြဲမူးယစ်ဆေး Hyper-တုန့်ပြန်သဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် 1990; Robinson နဲ့ Berridge, 1993; Kalivas et al ။ , 1998) compulsive မူးယစ်ဆေးတဏှာ (Robinson နဲ့ Berridge အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း, 1993; Kalivas et al ။ , 1998; Steketee နှင့် Kalivas, 2011) ။ ဒါဟာ NAc အတွင်း, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့် plasticity အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ, MSNs အတွက် DA အဲဒီ receptor အချက်ပြနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ထဲမှာမူးယစ်ဆေး-mediated စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (Lobo et al ထိန်းညှိနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ , 2010; Schmidt နဲ့ပီယပ်, 2010; ဖာဂူဆန် et al ။ , 2011; Pascoli et al ။ , 2011; Bocklisch et al ။ , 2013; Grueter et al ။ , 2013).
တွေနဲ့ Cre recombinase ဖော်ပြကြောင်းမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာသေးမီလေ့လာမှုများကိုကင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် D1R-MSNs သို့မဟုတ် D2R-MSNs များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထင်ရှားပါပြီ။ D1R-MSNs ၏ activation သတင်းများအရမျှအကျိုးသက်ရောက်မှု (Lobo et al ရှိပါတယ်စဉ်ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေး6ရက်အကြာမှာ NAc ၏ D2R-MSNs ၏ Optogenetic activation, locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။ , 2010) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့ခြင်းဟာ NAc ၏ D1R-MSNs ၏ output ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မေးခိုင်အဆိပ်အတောက် (Hikida et al နှင့်အတူ D1R-ဖော်ပြ MSNs ၏တားစီး။ , 2010ကိုကင်း CPP ကမပွောငျးလဲ D2R-MSNs (Hikida et al အတွက် Synaptic ဂီယာဖျက်သိမ်းခြင်းပြီးနောက်ရှုလေ့လာခဲ့ကြစဉ်), ကိုကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကို (CPP က) မှေးမှိန်။ , 2010) ။ D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံလှုံ့ဆော်ဖို့ယာယီပြစ်ဒဏ် (Kravitz et al induces သော်လည်း dorsal striatum အတွက် D2R-MSNs ၏ Optogenetic activation, ဇွဲအားဖြည့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ , 2012) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု D2R-MSNs ၏ optogenetic activation Bock et al (ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖိနှိပ်သော်လည်း။ တစ် chemicogenetic ချဉ်းကပ်မှုကနေတစ်ဆင့် D2R-MSNs ၏တားစီး, ကိုကင်းရယူဖို့လှုံ့ဆျောမှုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းလည်းအစီရင်ခံထားပါတယ် 2013) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Bocklisch et al ။ (2013D1R-MSNs အဆိုပါ VTA တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပါဘူးစဉ်), အထူး VTA အတွင်း GABAergic အာရုံခံခြင်းငှါ, VTA ဖို့ NAc စီမံကိန်း၏ကြောင်း D2R-MSNs သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဆားကစ် D1R-MSNs ၏ optogenetic activation နောက်ဆုံးတော့ကင်း-သွေးဆောင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (Bocklisch et al ပိုကောင်းစေပါတယ်ရာ DA အာရုံခံ, disinhibits ဆိုလိုသည်။ , 2013).
MSNs ဤနှစ်ခုလူဦးရေ, MSNs မျိုးစုံသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိနှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများသို့ / ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးရလဒ်များရှိသကဲ့သို့ MSNs နှင့် interneurons ၏အခြားအတန်းများအကြားဒေသဆိုင်ရာဆားကစ်ဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အချက်ကို, D1R- ၏ရလဒ်အထွက်၏ထင်ရသောရိုးရှင်းသောအဖွဲ့အစည်းကသော်ငြား MSNs နှင့် D2R-MSNs ရှုပ်ထွေးပြီးမော်လီကျူးကွဲပြားခြားနားသော, ဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များလိုက်လျောနိုင်ပါ။
ယခင်ကက D2R မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကသွေးဆောင် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ဤ Sim et al (ကနဦးမူးယစ်ဆေးဝယ်ယူသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, ကိုကင်းရှာဖို့ relapse potentiate ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 2013) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဒေတာ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ photostimulation Basal locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွား elicits ကဖော်ပြသည်။ Lobo et al ။ (2010) MSN ကိုမျိုးကွဲ activated ခဲ့သည်ဖြစ်စေသည့်အခါရွေ့လျားမပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, ဒါပေမဲ့သူတို့သာစုစုပေါင်း locomotor လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ်ထက် photostimulation မှ Basal locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်။ Kravitz et al ။ (2010) ကိုလည်း dorsal striatum အတွက် D2R-MSNs ၏ optogenetic activation လည်း locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ Basal locomotor လှုပ်ရှားမှု NAc ၏ D2R-MSNs ၏ photostimulation အားဖြင့် inhibited နှင့်စနစ်တကျသည်ဤအာရုံခံ၏ photostimulation စဉ်အတွင်း Basal locomotor လှုပ်ရှားမှု၏အချိန်သင်တန်းဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံးကြောင်းသရုပ်ပြဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ optogenetic activation အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစတင်သို့မဟုတ်စကားရပ်မထိခိုက်ခဲ့ပါကြောင်းလေ့လာသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာကာလအတွင်း D2R-MSNs ၏ photostimulation ကင်း-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာကိုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းမြားတှငျပွောငျးလဲမှဦးဆောင်ဗီဇစကားရပ်သို့မဟုတ်အချက်ပြခြင်းနှင့်အားဖြင့် Synaptic plasticity ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်၏အခြားပုံစံများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပေါ်တတ်သောဆုတ်ခွာကာလအတွင်းအထူးအချို့ signal ကိုစုဆောင်းနေကြသည် D2R-MSNs ကဖော်ပြသည်။ ဘယ်လိုကဤ MSNs စွဲ-related အပြုအမူတွေမှာသူတို့ရဲ့ကွဲပြားအကျိုးဆက်များထုတ်လုပ်နိုင်သောဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် employ မသိရသည်။ Grueter et al ။ (2013) NAc အတွက်ΔFosB differential တစ်ဆဲလ် type- နှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ဖက်ရှင်အတွက် Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ modulates ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကချန်ဒရာ et al ။ (2013) D2R-MSNs သော်လည်းမ D1R-MSNs ၏ထပ်ခါတလဲလဲ ChR2 activation ကိုကင်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူ Tiam1 ဗီဇတစ်ခုကိုချ-စည်းမျဉ်း, အ actin cytoskeleton ၏ပြန်စီစဉ်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ပရိုတိန်း, စေ၏။ အစီရင်ခံတင်ပြ ထို့ကြောင့်, မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ၏တည်မြဲသက်ရောက်မှုလိုက်လျောသောယန္တယားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းမှ Synaptic လိုက်လျောညီထွေထိန်းချုပ်ဤ MSNs အတွက်မော်လီကျူးဖြစ်ရပ်များ၏ဆဲလ်-ရွေးချယ်သော induction delineate ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြို့သောအပြောင်းအလဲသာရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာကင်းမှနောက်ဆုံးထိတွေ့ပြီးနောက်ပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့ခုနှစ်တွင်ဆုတ်ခွာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှအကြံပြုထားသည်။ ဤသည် abstinence plasticity (Robinson နဲ့ Berridge ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအာမခံကြောင်းအကြံပြု, 2003; Boudreau နှင့် Wolf က, 2005; Boudreau et al ။ , 2007; Kourrich et al ။ , 2007) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ဆုတ်ခွာသူ့ဟာသူ D2R-မှီခိုအချက်ပြ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါသည်သော NAc အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ခလုတ်ဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း NAc အတွက် D2R-MSNs ၏ activation ဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်ကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းဒီစိတ်ကူးအဘို့ဆွဲဆောင်မှုထောက်ခံမှုပေးသည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဒါဟာယခင်ကအယ်လ် Sim et (D2R KO ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ်အဖြစ်ကိုကင်း-ရှာခြင်းနှင့် relapse အပြုအမူတွေကိုဖိနှိပ်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းစိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 2013) ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း D2R-MSNs ၏ photostimulation ကိုလည်းအကဲဆတ်ခြင်းစကားရပ် attenuates သို့ဖြစ်. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ glutamategic synapses မှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် Synaptic plasticity D2R KO ကြွက်များ၏ NAc (Sim et al အတွက်ပြောင်းလဲနေသည်။ , 2013) ။ ကသေးဆုတ်ခွာကာလအတွင်း D2R MSNs သို့မဟုတ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု photostimulation Synaptic plasticity အလားတူပွောငျးလဲ elicits ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် NAc ၏ D2R-MSNs ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် plasticity အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ၎င်းယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ခြင်းရှိမရှိမသိရပေမဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုရပ်နားခြင်းပြီးနောက် relapse ။ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး D2R MSNs ဒီအထူးသဖြင့်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့် Synaptic plasticity အပေါ် D2R-MSNs photostimulation နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးဆက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ရာအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောဆားကစ်ထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
D2R-ဖော်ပြ MSNs များအတွက်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍ NAc ထံမှ D1R-MSNs ၏ output ကိုတားစီးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယခင်သုတေသန MSNs ဝေးလံခေါင်သီပစ်မှတ်မှရှည်လျားသော axon ပရောဂျက်ပေမယ့်, ကျယ်ပြန့်ထပ် axon ကိစ္စအတွက်နှင့်ကပ်လျက် spiny projection အာရုံခံ (Grofová၏ dendritic သစ်ပင်များအကြားဖြစ်ပေါ်ကွောငျးဖျောပွသ 1975; Preston et al ။ , 1980; Wilson နှင့်အာရှရပင်, 1980) ။ ဒါက NAc အတွင်း MSN ကိုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှဒေသခံ Synaptic ဆက်သွယ်မှုညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ spiny projection အာရုံခံ၏အားလုံးအတွက်ထံမှ Intracellular အသံသွင်း, (ကြွက် striatum အတွက် Czubayko နှင့် Plenz MSNs အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ inhibitory ဆက်သွယ်မှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ 2002; Tunstall et al ။ , 2002; Koos et al ။ , 2004; Gustafson et al ။ , 2006) ။ D2R-MSNs နီးပါးသီးသန့်နဲ့ Synaptic ဆက်သွယ်မှုဖွဲ့စည်းရန်သော်လည်းဒါဟာအစ striatum အတွက် MSNs ၏မှုများထပ်တလဲလဲပေါင်ပစ္စည်း axon အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော synapses ကျပန်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအစီရင်ခံခဲ့ပြီး D2R-MSNs အခြား D1R-MSNs နှင့် D1R-MSNs နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး Synaptic ဆက်သွယ်မှုလုပ် D1R-MSNs (Taverna et al ။ , 2008) ။ accumbal MSNs အကြားဒေသဆိုင်ရာမှုများထပ်တလဲလဲ axon ကိစ္စအတွက်အားဖြင့် GABAergic အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်း Taverna et al (သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြပေမယ့်။ , 2004), ဒါကြောင့်နေဆဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေး D2R-MSNs ကျပန်းဒေသခံ microcircuits ဖွဲ့စည်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ striatum အတွက်လုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့ဦးစားပေးဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ NA အတွက် microcircuits အထောက်အကူပြုရှိမရှိမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ ChR2 D2R ဖော်ပြကြောင်းအိမ်နီးချင်း MSNs နှင့်အတူ Synaptic ဆက်သွယ်မှုစေနှင့် D1R-MSNs ပြီးတော့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ D2R-mediated မြှင့်တင်ရေး modulate မှ D1-MSNs တစ်ခု inhibitory အဆက်အသွယ်ကွိုးစားအားထုကြောင်းဖော်ပြ NAc အတွက် D1R-MSNs အကြံပြုအပ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျနော်တို့ NAc D2R-MSNs ၏ optogenetic activation ကိုကင်းစွဲကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင် plasticity ပွောငျးလဲကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ပေးထားသောဆုတ်ခွာကာလအတွင်း D2R-မှီခိုအချက်ပြ၏လှုပ်ရှားမှုကင်း-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏အဓိကထိန်းညှိဖြစ်ပေါ်လာကျနော်တို့ D2R-MSNs မူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့် relapse ဘို့ကြာရှည်လိုက်လျောညီထွေ၏အရေးပါသောဖျန်ဖြေဖြစ်ကြောင်းတင်ပြသည်။ အတူတူထပ်တလဲလဲမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအောက်တွင်အလုပ် NAc D2R-MSNs ၏တိကျသောဆားကစ်၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ D2R-မှီခိုအချက်ပြ၏မော်လီကျူးအလွှာ၏ဖော်ထုတ်ခြင်း, မူးယစ်ဆေး relapse အတွက်ကုထုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်ဝတ္ထုပစ်မှတ်များကိုသင့်ပါတယ်။
နှင့်ဇီဝနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဖြင့်၎င်း, ဤလုပ်ငန်း (Grant ကအမှတ် 2013M3C7A1056101 ဂျာ-Hyun Baik ဖို့) ကိုဦးနှောက်သုတေသနအစီအစဉ်အားဖြင့်ကိုရီးယားအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (NRF) သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ထောက်ပံ့ငွေ, အိုင်စီတီနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းကထောက်ခံခဲ့သည် (ဂျာ-Hyun Baik ရန်, Grant ကအမှတ် 2013M3A9D5072550) ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့်ဂျော့ခ်ျဂျေသြဂတ်မှကိုရီးယားအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (NRF) သည်သိပ္ပံဝန်ကြီးဌာန, အိုင်စီတီနှင့်အနာဂတ်စီမံကိန်းခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေ (၏ကမ္ဘာ့အတန်းအစားသိပ္ပံ (WCI) အစီအစဉ် ; ဂျော့ခ်ျဂျေသြဂတ်ဖို့ WCI 2009-003) အဖြစ်ဂျာ-Hyun Baik ရန်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ် Grant က () နှင့်စင်ကာပူအမျိုးသားသုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (နေ CRP ထောက်ပံ့ကြေး) ။
Baik JH (2013) ။ ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်အချက်ပြ Dopamine ။ တပ်ဦး။ အာရုံကြော Circuits 7: 152 10.3389 / fncir.2013.00152 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baik JH, Picetti R. , Saiardi အေ, Thiriet G. အ, Dierich အေ, Depaulis အေ, et al ။ (1995) ။ dopamine D2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Parkinsonian ကဲ့သို့ locomotor ချို့ယွင်း။ သဘာဝတရား 377, 424-428 10.1038 / 377424a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC (2007) ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မက်လုံးပေး salience များအတွက်အမှု။ Psychopharmacology (Berl) 191, 391-431 10.1007 / s00213-006-0578-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Bock R. , ရှင် JH, Kaplan AR, Dobi အေ, Markey အီး, Kramer PF ။ (2013) ။ အဆိုပါ accumbal သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း Strenghtening compulsive ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်။ နတ်။ neuroscience ။ 16, 632-638 10.1038 / nn.3369 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bocklisch C. , Pascoli V. , Wong က JC, အိမ် DR, Yvon C. , က de Roo အမ်, et al ။ (2013) ။ ကိုကင်းသည့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ဂါဘမြို့သားဂီယာ၏အလားအလာများက dopamine အာရုံခံ disinhibits ။ သိပ္ပံ 341, 1521-1525 10.1126 / science.1237059 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boudreau AC အ, Reimers JM, Milovanovic အမ်, ME Wolf (2007) ။ ကြွက်နျူကလိယထဲမှာဆဲလ်မျက်နှာပြင် AMPA receptors ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုး accumbens ပေမယ် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ၏ပြောင်းလဲ activation နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကင်းစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် Internalize အတွင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 10621-10635 10.1523 / jneurosci.2163-07.2007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boudreau AC အ, Wolf က ME (2005) ။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်တိုးမြှင့် AMPA အဲဒီ receptor မျက်နှာပြင်စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 9144-9151 10.1523 / jneurosci.2252-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al ချန်ဒရာ R. , Lenz JD, Gancarz လေး, Chaudhury ဃ, Schroeder GL, ဟန် MH ။ (2013) ။ နျူကလိယ် D1R ၏ Optogenetic တားစီးအာရုံခံ Tiam1 ၏ကင်း-mediated စည်းမျဉ်းပွောငျးလဲ accumbens ။ တပ်ဦး။ Mol ။ neuroscience ။ 6: 13 10.3389 / fnmol.2013.00013 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chang HT, Kitai ST (1985) ။ ယင်းနျူကလိယ၏ Projection အာရုံခံ accumbens: တစ်ခု intracellular တံဆိပ်ကပ်လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 347, 112-116 10.1016 / 0006-8993 (85) 90894-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chausmer AL, အဲလ် GI, Rubinstein အမ်, အနိမျ့ MJ, ယူဆပါတယ် DK, Katz JL (2002) ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်တွေမှာကင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ Psychopharmacology [(Berl) 163, 54-61 10.1007 / s00213-002-1142-y ကPubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chevalier G. အ, Deniau JM (1990) ။ striatal လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဖြစ် Disinhibition ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 13, 277-280 10.1016 / 0166-2236 (90) 90109-ဎ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Czubayko U. , Plenz ဃ (2002) ။ striatal spiny projection အာရုံခံအကြားအစာရှောင်ခြင်း Synaptic ဂီယာ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 99, 15764-15769 10.1073 / pnas.242428599 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဖာဂူဆန်သည် SM, Eskenazi ဃ, Ishikawa အမ်, Wanat MJ, Phillips က PE သည် Dong Y. , et al ။ (2011) ။ ယာယီအာရုံခံတားစီးာင်းအတွက်သွယ်ဝိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်ဖော်ပြသည်။ နတ်။ neuroscience ။ 14, 22-24 10.1038 / nn.2703 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
goto Y. ရေ့ AA ကို (2005) ။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 805-812 10.1038 / nn1471 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grofováဗြဲ (1975) ။ substantia nigra မှထုတ်လုပ်တဲ့ striatal နှင့် pallidal အာရုံခံ၏မှတ်ပုံတင်။ horseradish peroxidase ၏ retrograde axon သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားဖွငျ့တစ်ခုစမ်းသပ်လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 91, 286-291 10.1016 / 0006-8993 (75) 90550-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grueter BA, Robison AJ, Neve RL, Nestler EJ, Malenka RC (2013) ။ ΔFosB differential နျူကလိယကိုတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း function ကို accumbens modulates ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 110, 1923-1928 10.1073 / pnas.1221742110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gustafson N. , Gireesh-Dharmaraj အီး, Czubayko U. , ဘလက်ဝဲလ် KT, Plenz ဃ (2006) ။ တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်ဗို့အားနှင့်စသည်တို့အတွက် striatal microcircuit အတွက်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် feedforward Synaptic ဂီယာ၏လက်ရှိ-ညှပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Neurophysiol ။ 95, 737-752 10.1152 / jn.00802.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hikida တီ, Kimura K. , Wada N. , Funabiki K. , Nakanishi အက်စ် (2010) ။ ဆုချမှတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် striatal လမ်းကြောင်းအတွက် Synaptic ဂီယာနှင့်ဆန္ဒရှိအပြုအမူများ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ 66, 896-907 10.1016 / j.neuron.2010.05.011 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, Duffy P. (1990) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် extracellular dopamine အပေါ်စူးရှခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ကင်းကုသမှု effect ။ synapses 5, 48-58 10.1002 / syn.890050104 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalivas PW, ပီယပ် RC, Cornish- ဂျေ, Sorg BA (1998) ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာနှင့် relapse အတွက်ာင်းတစ်ဦးကအခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 12, 49-53 10.1177 / 026988119801200107 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koos တီ, Tepper JM, Wilson က CJ (2004) ။ အဆိုပါ neostriatum အတွက် spiny နှင့်အစာရှောင်ခြင်း-spiking အာရုံခံခြင်းဖြင့် evoked IPSCs ၏နှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 7916-7922 10.1523 / jneurosci.2163-04.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kourrich အက်စ်, Rothwell PE, Klug JR, သောမတ်စ် MJ (2007) ။ ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် bidirectional Synaptic plasticity ထိန်းချုပ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 7921-7928 10.1523 / jneurosci.1859-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kravitz AV စနစ်, Freeze BS, က Parker PR စနစ်, ကေး K. , သွင် MT, Deisseroth K. , et al ။ (2010) ။ Basal ganglia circuitry ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုတို့က parkinsonian မော်တာအပြုအမူတွေ၏စည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရား 466, 622-626 10.1038 / nature09159 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kravitz AV စနစ်, Tye ld, Kreitzer AC အ (2012) ။ အားဖြည့်အတွက်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း striatal အာရုံခံများအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ နတ်။ neuroscience ။ 15, 816-818 10.1038 / nn.3100 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kreitzer AC အ, Malenka RC (2008) ။ Striatal plasticity နှင့် Basal ganglia circuit ကို function ကို။ သဘာဝတရား 60, 543-554 10.1016 / j.neuron.2008.11.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
le Moines C. , Bloch ခ (1996) ။ ယင်းနျူကလိယ၏ peptidergic အာရုံခံအတွက် D3 dopamine အဲဒီ receptor ၏ expression accumbens: အ D1 နှင့် D2 dopamine receptors နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ neuroscience 73, 131-143 10.1016 / 0306-4522 (96) 00029-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lobo MK, et al Covington သူ, 3rd, Chaudhury ဃ, Friedman AK Sun, အိပ်ချ်, Damez-Werno ဃ။ (2010) ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ 330, 385-390 10.1126 / science.1188472 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lobo MK, Nestler EJ (2011) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် striatal balancing လုပ်ရပ်: တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ။ တပ်ဦး။ Neuroanat ။ 5: 41 10.3389 / fnana.2011.00041 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lüscher C. , Malenka RC (2011) ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ရန်။ အာရုံခံဆဲလျ 69, 650-663 10.1016 / j.neuron.2011.01.017 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
O'Donnell P. ရေ့ AA ကို (1993) ။ စသည်တို့တှငျမှတျတမျးတငျထားသ accumbens core နဲ့ shell ကိုအာရုံခံ၏ဇီဝကမ္မနှင့် morphological ဂုဏ်သတ္တိများ။ synapses 13, 135-160 10.1002 / syn.890130206 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pascoli V. , Turiault အမ်, Lüscher C. (2011) ။ ကိုကင်း-evoked Synaptic အလားအလာပြောင်းပြန်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သပ္ပါယ်အပြုအမူ reset လုပ်တယ်။ သဘာဝတရား 481, 71-75 10.1038 / nature10709 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Preston RJ, ဆရာတော် GA, Kitai ST (1980) ။ ကြွက် neostriatum ကနေအလတ်စား spiny အာရုံခံဆဲလျ projection: တစ်ခု intracellular horseradish peroxidase လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 183, 253-263 10.1016 / 0006-8993 (80) 90462-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (1993) ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 18, 247-291 10.1016 / 0165-0173 (93) 90013-p [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (2003) ။ စွဲလမ်း။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 54, 25-53 10.1146 / annurev.psych.54.101601.145237 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schmidt က HD ကို, ပီယပ် RC (2010) ။ အချိုမှုဂီယာအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် neuroadaptations: တဏှာနှင့်စွဲလမ်းများအတွက်အလားအလာကုထုံးပစ်မှတ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1187, 35-75 10.1111 / j.1749-6632.2009.05144.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sesack SR, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို (2010) ။ Cortico-Basal ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 27-47 10.1038 / npp.2009.93 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
sim HR, Choi ty, Lee က HJ, Kang EY, Yoon အက်စ်, ဟန် PL, et al ။ (2013) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ plasticity အတွက် dopamine D2 receptors ၏အခန်းက္ပ။ နတ်။ Community ။ 4: 1579 10.1038 / ncomms2598 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က RJ, Lobo MK, Spencer အက်စ်, Kalivas PW (2013) ။ D1 နှင့် D2 အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် projection အာရုံခံ (တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူသေချာပေါက်ပြောရလျှင်မ dichotomy) accumbens ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 23, 546-552 10.1016 / j.conb.2013.01.026 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steketee JD, Kalivas PW (2011) ။ လိုသောမူးယစ်ဆေး: မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှအမူအကျင့်ထိခိုက်စေ relapse ။ Pharmacol ။ ဗျာ 63, 348-365 10.1124 / pr.109.001933 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Taverna အက်စ်, Ilijic အီး, Surmeier DJ သမား (2008) ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏မှုများထပ်တလဲလဲပေါင်ပစ္စည်းဆက်သွယ်မှုပါကင်ဆန်ရောဂါမော်ဒယ်များအတွက်နှောင့်အယှက်နေကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 5504-5512 10.1523 / JNEUROSCI.5493-07.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Taverna အက်စ်, ဗန် Dongen YC, Groenewegen HJ, Pennartz CM (2004) ။ situ အတွက်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံအကြား Synaptic ဆက်သွယ်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်ဇီဝကမ္မသက်သေအထောက်အထား။ ဂျေ Neurophysiol ။ 91, 1111-1121 10.1152 / jn.00892.2003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ် MJ, Kalivas PW, Shaham Y. (2008) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်နှင့်ကိုကင်းစွဲအတွက် Neuroplasticity ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 154, 327-342 10.1038 / bjp.2008.77 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tunstall MJ, Oorschot DE, Keane အေ, Wickens JR (2002) ။ ကြွက် striatum အတွက် spiny projection အာရုံခံအကြား Inhibitory interaction က။ ဂျေ Neurophysiol ။ 88, 1263-1269 10.1152 / jn.00886.2001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vanderschuren LJ, Kalivas PW (2000) ။ အမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ dopaminergic နှင့် glutamatergic ဂီယာမှ ALTER: preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychopharmacology (Berl) 151, 99-120 10.1007 / s002130000493 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wilson က CJ, အာရှရပင်လေး (1980) ။ ဒဏ်ငွေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကြွက် neostriatum ၏ဘုံ spiny အာရုံခံဆဲလျ၏ Synaptic ကွန်နက်ရှင်: horseradish peroxidase ၏ intracellular ဆေးထိုးအလုပ်သမားတစ်ဦးလေ့လာမှု။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 194, 599-615 10.1002 / cne.901940308 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 5, 483-494 10.1038 / nrn1406 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]